अष्ट्रेलियामा २ साता लकडाउन, सिड्नीवासीलाई सरकारले के कस्तो सुविधा दिन्छ? :: Setopati
अष्ट्रेलियामा २ साता लकडाउन, सिड्नीवासीलाई सरकारले के कस्तो सुविधा दिन्छ?
हेमन्त काफ्ले सिड्नी, असार १६
न्युसाउथवेल्सीकी प्रिमियर ग्लाडीज बेरिजिक्लियनले न्यु साउथवेल्सका केही स्थानहरू लकडाउन गर्ने निर्णयपछि आर्थिक मारमा परेका कामदार तथा व्यवसायका लागि आर्थिक सहयोगको पनि घोषणा गरेकी छिन्।
लामो समयसम्म सुरक्षित रहेको अस्ट्रेलियाको सिड्नी शहर वरपर कोरोनाभाइरस सक्रमण अप्रत्याशित रूपमा देखिएपछि २६ जुनदेखि दुई साताका लागि लकडाउन घोषणा गरिएको थियो।
न्युसाउथ वेल्सका अर्थमन्त्री डोमिनिक पेर्रोटेटले सीड्नी र यस वरपर प्रभावित क्षेत्रका साना व्यापारीका लागि सहायता प्याकेज घोषणा गरेका हुन्।
मगंलबार गरिएको उक्त सहायता प्याकेज अन्तर्गत साना व्यवसायले ५ हजारदेखि १० हजार डलरसम्मको अनुदान प्राप्त गर्नेछन्।
साना व्यापार–व्यवसायहरूले प्रतिबन्ध लागू भएका बखत आफ्नो कारोबारमा आएको ह्रासको अनुपातमा राज्य सरकारबाट सहयोग प्राप्त गर्नेछन्। जस अनुरूप व्यापारमा प्रत्यक्ष रूपमा ७० प्रतिशत गिरावट भोग्नेले १० हजार डलर, ५० प्रतिशतको कम प्रभावितले ७ हजार डलर र ३० प्रतिशत कमी आएकाले ५ हजार डलर पाउने सहायता प्याकेजमा उल्लेख गरिएको छ।
न्युसाउथ वेल्सका अर्थमन्त्री डोमिनिकले लकडाउनका कारण राज्यको साना व्यापार व्यवसायमा ठूलो धक्का पुग्ने विश्वासका साथ पछिल्लो सरकारी सहायता प्याकेज घोषणा गरिएको बताएका छन्।
यो नयाँ आर्थिक सहायतासँगै डाइन एन्ड डिस्कभर कार्यक्रमलाई पनि आगामी अगस्ट ३१ तारिखसम्मका लागि लम्ब्याइएको छ। मानिसले उक्त कार्यक्रम अन्तर्गतको प्राप्त सहयोग भौचरलाई टेक अवेका वा पिकअपका लागि पनि प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
नयाँ घोषणा गरिएका अनुदान न्यु साउथवेल्सभरका साना व्यापार तथा व्यवसायका साथै एकल व्यवसाय गर्ने व्यक्ति, गैर नाफामूलक संस्थाहरू पनि योग्य हुनेछन्।
त्यसैगरी विद्यालयको बिदाका समयमा हस्पिट्यालिटी तथा पर्यटकीय सेवा सञ्चालकलाई पनि परेको कठिनाइका कारण ती उद्योगका सेवा प्रदायकले समेत उक्त सरकारी सहयोगका लागि आवेदन हाल्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रिमियर ग्लाडिस बेरिजिक्लियन भन्छिन् कि, आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई लिएर कसैले पनि तनाव महसुस गर्नुनपरोस्।
सार्थ न्युसाउथ वेल्समा लकडाउन घोषणा भएपछि संघीय सरकारले पनि ५ सय डलरसम्मको कोभिड–१९ विपद भुक्तानीको व्यवस्था गरेको छ।
जुलाई १ तारिकबाट लागू हुने उक्त भुक्तानी लकडाउनका कारण रोजगारीबाट हुने आम्दानी गुमाएका १७ वर्ष माथिका व्यक्तिका लागि लागू गरिएको हो। अस्ट्रेलियाली नागरिक, स्थायी बासिन्दा, प्रोटेक्टेड स्पेसल क्याटोगरीका साथै दक्ष कामदार पनि यस भुक्तानीका लागि योग्य हुन सक्नेछन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १६, २०७८, १६:११:००